पहिला मोदीलाई स्वागत गर्ने कि चीन जाने ओली दोधारमा - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| २ माघ २०७५, बुधबार
पहिला मोदीलाई स्वागत गर्ने कि चीन जाने ओली दोधारमा
काठमाडाै‌ बैशाख ९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली
भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बेइजिङ पठाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिला चीन भ्रमण गर्ने कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्ने दोधारमा छन्।
ज्ञवालीको भ्रमणक्रममा चीनले ओलीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको सन्देश दिएको छ भने कूटनीतिज्ञहरूले भारतीय समकक्षीलाई चीन भ्रमणअगावै काठमाडौंमा स्वागत गर्न सुझाएका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन कठिन बनाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्णय गरिसक्नुभएको होला तर हामीलाई यसै गर्नू भन्नुभएको छैन,’ ओली निकटस्थले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग छलफलपछि दुवै उच्चस्तरीय भ्रमणको टुंगो लाग्छ ।’ स्रोतका अनुसार मोदी काठमाडौं ओर्लनुअघि नै प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुगेर फर्कनेबारे आन्तरिक छलफल चलिरहे पनि निर्णय हुन बाँकी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो साता नै हुनसक्ने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । भारतीयले उक्त चाहना कूटनीतिक माध्यमबाट व्यक्त गरिसकेको भए पनि त्यसको निर्णय भएको छैन।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला दिल्ली जाने परम्परालाई निरन्तरता दिएका ओलीलाई चीन भ्रमण तत्काल गर्न एक प्रकारको दबाब छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको उत्तर यात्रा र मोदीको काठमाडौं यात्राबारे लगातार छलफल भइरहे पनि कुन पहिला भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
ओलीले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नुअघि आफ्नो कुनै भ्रमण नहुने बताएकाले पनि तयारी गर्न अन्योल भएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि प्रधानमन्त्री जतिसक्दो छिटो चीन जाने वातावरण परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो भ्रमणक्रममा मिलाएका छन् । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन तहमा नआएकाले त्यसलाई मूर्त रूप दिन ओलीको चीन भ्रमण उपयोगी हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
उच्चस्तरको भ्रमण वर्ष भनिरहेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण वा ओलीको चीन भ्रमण हुनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छैन तर भ्रमणको प्राथमिकता अन्योलमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘भ्रमणहरूबारे छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजकीय भारत भ्रमणमा र त्यसपछि पनि उच्चस्तरको भ्रमणबारे छलफल भइरहेको छ । अहिले नै यो वा त्यो भन्नुभन्दा बजेटको तयारीले केही ढिला हुन सक्छ तर निर्णय भइसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन्छ। दुवै छिमेकबाट नेपालमा पनि भ्रमण हुन्छ । अहिले सबै भ्रमण छलफलकै चरणमा छन्।’
भारतीयहरूले तिथि नै सार्वजनिक गरिसके नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो उनीहरूको विषय हो । हामीले यहाँको अवस्था र अनुकूलता पनि हेर्नुपर्छ ।’ बजेट सेसन आरम्भ हुँदै छ । अहिले प्रधानमन्त्री एमाले–माओवादी एकता टुंगोमा पुर्‍याउन लगातार छलफलमा छन्।
तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ तथा बलियो सरकार गठनपछि भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमण आफैंमा अर्थपूर्ण छ । ओली सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्त्व दिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारामा अडेर छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गर्न सरकार चुक्दैन,’ उनको भनाइ छ।
‘भ्रमण हुने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हुन्छ नै तर अहिले नै यो वा त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । केही ठोस निक्र्योलमा हामी पुग्न लागेका छौं । दुवैतर्फको अनुकूलताले नै भ्रमण हुने हो,’ चीनबाट फर्केपछि शनिबार उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब छलफल गर्छौं र तय गर्छौं । हामी अहिले छलफलमै छौं।’
विदेश नीतिमा छिमेकले बढी र पहिलो प्राथमिकता पाउने उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले बेइजिङमा भनेका थिए, ‘चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले ठूलो महत्त्व दिँदै आएका छौं । हाम्रो सिद्धान्तअनुसार नै एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनस् दोहोर्‍याउँछु ।’ दुई वर्षअघि भएका सम्झौताको समीक्षा पनि उनको भ्रमणमा भएका छन् । पारवहन सम्झौता तथा नेपाल–चीन खुला व्यापारका लागि संयुक्त रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी कार्यान्वयनबारे छलफल भए पनि अझै त्यसमा ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन।
‘हामीले पारवहन सम्झौताबारे विमर्श गर्‍यौं र आगामी दिनमा यसलाई अन्तिम रूप दिन सहमत भयौं । चीनसँगको व्यापारमा नेपालले बेहोर्नुपरेको ठूलो घाटामा सुधार गर्न सहयोगी उपाय अपनाउन आग्रहसमेत गरें,’ उनले भने । उनले जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुने बताएका थिए।
ज्ञवालीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको बताएका छन् । यसका लागि अर्थ र परराष्ट्र सचिवले परियोजना छनोट गरिसकेका छन् । यो परियोजनाले भौतिक पूर्वाधार, रेलमार्ग, सडकमार्गसहित सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ को विकास, व्यापार विस्तार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरको सम्बन्धमा योगदान दिने नेपालको अपेक्षा रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘सीमापार बहुआयामिक यातायात सञ्जाल विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको र यसले छिट्टै मूर्त रूप पाउने उनको धारणा छ।
चीनले अघि बढाएको बीआरआईमार्फत साझा समृद्धिका लागि व्यापार र आर्थिक एकीकरणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनको धारणा छ । ‘सहकार्यमा उपलब्धि हासिल गर्न सँगसँगै अगाडि बढ्न नेपाल र चीनले समझदारी गरिसकेकाले त्यहाँ छिट्टै पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘चीनसँग सहकार्य गर्नु नेपालका लागि गर्वको
चिनियाँ पक्षले भने नेपाल शान्ति, स्थायित्व र विकासको युगमा प्रवेश गरेकाले अब भारतसँग पनि सहकार्य गरेर विकास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ज्ञवालीसँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले विकासका लागि सहकार्यमा जोड दिइसकेका छन्।
केरुङसम्म चिनियाँ रेल आएपछि काठमाडौंसम्मको नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग तथा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अवधारणा अघि बढेको र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी रहेकाले त्यसमा कुन तवरबाट काम हुने अन्योल छ । नेपाल र चीन दुवैको हित हुने परियोजना छनोट गर्न तथा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बन्ने परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति ज्ञवालीको चीन भ्रमणमा भएको छ।
यद्यपि यस्तो परियोजना छनोटको विषयमा यसअघि नै अर्थ र परराष्ट्र सचिवले काम गर्दै आएका थिए । चीन सरकारले आफ्ना प्रमुख सहरमा नेपाललाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रचार गरिदिएमा चिनियाँ पर्यटक नेपालमा वृद्धि हुने बुझाइ नेपालको छ । यसमा नेपालले चीनलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ।
नेपालले निकै जोड दिएको क्रस हिमालयन रेलमार्गलाई चीनले समेत सकारात्मक रूपमा लिएको छ । त्यो रेल नेपाल हुँदै कुन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने भन्ने विषय चीनका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ भने नेपाललाई चीनको रेल काठमाडौं ल्याउनु नै महत्त्वको विषय हो । रेलमार्ग नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारेको भए पनि चीनले नेपालले गर्ने तयारीलाई हेरिरहेको छ । ज्ञवालीको चीन भ्रमणक्रममा हिमालयन क्षेत्रमा बहुआयामिक यातायात सञ्जाल विस्तार गर्न सहमति जुटेको छ । तर, त्यसका लागि दुवै देशले परियोजना छनोट गरी अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित ९ बैशाख २०७५, आइतबार | 2018-04-22 08:30:21
जब माहुरीकाे गाेलाे वाइडबडीमा झुम्मियाे‍‍...
काठमाडौंबाट मंगलबार दिउँसो २ सय ६ यात्रु बोकेर भारतको बैंग्लोरस्थित केम्पेगोडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको...
४६९ स्थानीय तहमा छैनन् डाक्टर, आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्दैन सरकार
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक डाक्टर पुर्‍याउने योजना अलपत्र छ।
१८ वर्ष वित्दा पनि सर्वोच्चले लाउडा प्रकरण टुंग्याएन
१८ वर्ष पुरानो बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन।
जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ला?
बम्जनले देखे सुरक्षा खतराः तत्काल सार्वजनिक नहुने
रामबहादुर बम्जन सम्बद्ध बोधी श्रवण धर्म संघले माघ ६ गतेबाट सिन्धुलीस्थित आश्रममा मैत्री धर्म प्रज्ञा प्रशिक्षण तथा विश्व शान्ति महामैत्री पूजाको...
बुद्धिबंगारा के हो ? किन दुख्छ बुद्धिबंगारा ?
सबैभन्दा ढिलो आउने दाँत बुद्धिबंगारा हो।
कांग्रेसले गरिरहेको गलत हिसाब–किताब
‘के नेकपाले अहिले अंगिकार गरेकै सामाजिक रुपान्तरणको मोडेल कांग्रेसको मोडेल हो? हो भने यसको स्वामित्व दाबी गर्न किन सक्दैन कांग्रेस? हैन भने कांग्रेसको बैकल्पिक मोडेल के हो?’
के नेपाल बन्ला? बाबुराम भट्टराईको जवाफ
हिन्द-प्रशान्त रणनीतिः नेपाललाई अवसरै-अवसर
डा. अनिल सिग्देल
मणि दाहाल काठमाडौं, - पहिलो पटक नेपालको हिमाल आरोहण गर्ने र नेपाललाई ६८ वर्षअघि नै पूरै यूरोपमा चिनाउने तिनै मोरिस हर्जोगको आज, मंगलबार १०० औं जन्मदिन हो।
जो रानी ऐश्वर्यकी साथी भइन्, गिरिजा–सुशीलको माया पाइन्
मेरो पहिलो चुम्बन
बीपी र महेन्द्र जोडिएपछि यसरी चम्कियो ‘कृष्ण पाउरोटी’ ब्राण्ड (भिडियो)
शिक्षक भएपछि कम्तीमा के-के जान्न जरुरी छ?
शिक्षकले अरू धेरै कुरा नजाने पनि आफूले पढाउने विषयमा, आफूले खाने जागिरका बारेमा जानकार हुनु जरूरी हुन्छ। यसका लागि शिक्षक आफैं स्रोतपूर्ण हुनुपर्छ। शिक्षकलाई स्रोतपूर्ण बनाउने साधन हुन् पुस्तक।
नेपालीले कति चिनेका छौं चीन?
राजतन्त्र जोगाउन गिरिजाबाबुसँग डा गिरिको त्यो अन्तिम आग्रह
चीनले चन्द्रमामा विरुवा उमार्यो
बेइजिङ, माघ १ - चीनले चन्द्रमामा विरुवा उमारेको दावी गरेको छ। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनले मंगलबार चाङ–४ मिसन अन्तर्गत चन्द्रमा पुगेको आफ्नो रोवोटिक यानले छरेको बिउबाट विरुवा उम्रिएको जनाएको हो।
चन्द्रमाको सफलतापछि चीनको उद्देश्य मंगल ग्रहतर्फ
फेसबुक म्यासेन्जरमा अब ‘म्यासेज डिलेट’ फिचर
भारतमा लोकप्रिय चिनियाँ एप्लिकेशनहरु
क्यानडेली प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने अफगानी अब्दुलको विश्वभर चर्चा
माघ १ - केहीदिन अघिमात्र भारतीय अभिनेता सन्जय दत्तजस्तै देखिने एक नागरिकको चर्चा भएको थियो।
सन्जय दत्तजस्तै देखिने बाटिस्टी बोलिभियामा पक्राउ परे
खुल्दैछ ४५ सय वर्ष पुरानो 'प्रेम जोडी कंकाल'को रहस्य
सात हजार फिटमाथिको जोखिमयुक्त हेलिकप्टर उद्धार (भिडियो)
अब सबैलाई रोजगारी, नभए भत्ता
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ प्रहरी निशानामा, मोटरसाइकलमा भाडाका यात्रु बोक्न रोक
यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय बिना नै ट्राफिक प्रहरीले बंगलादेशी कम्पनी ‘पठाओ’ र नेपाली कम्पनी ‘टुटल’ लाई निजी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनमा...
एसएसपी बढुवाको बाटो खुला, चार महिलासहित ३२ प्रतिस्पर्धामा
सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २८ को उपनियम १ (क) संशोधन गरेको छ। नियमावली संशोधनसँगै वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवाका लागि कानुनी बाटो...
आईएको परीक्षा भर्खरै सकिएको थियो। त्यति नै बेला मञ्जुले गोरखापत्रमा राजा वीरेन्द्रसँग ऐश्वर्याको फोटो देखिन्। जुन फोटो बिहेको शुभकामना तथा...
फुल्चोकी यात्राः मूलबाटो छाड्यो कि बेपत्ता हुने खतरा बढ्यो
‘रात सुरुहुनु अघि नै केही गरिहाल्नु पथ्र्यो, हामी ७ वटा टिम बनाएर फिल्डमा गयौं,’ ललितपुरका एसपी खनालले भने, ‘मेट्रोले टिपाएको नम्बरमा एकपटक धन्न...